ajụjụ Convair 990A & FSX
2 afọ 4 ọnwa gara aga #155 by FCAIR
M a nnọọ Big Fan nke Convair 880 & 990. e-agbalị iji nweta otu arụnyere na a VC ruo ọtụtụ ọnwa na-enweghị chioma. Ọ dị onye nwere a 880 ma ọ bụ 990 na a VC na ha ga-adị njikere ikere òkè. M nwara iji wụnye HJG convairs ma ọ dịghị mgbe ha na-egosi na egwuregwu. Mgbe ọtụtụ mgbalị iji nweta ha na-arụ ọrụ m mechara dị nnọọ nyere elu ebe ha na-adịghị a VC agbanyeghị. Ndị ọzọ ụbọchị m hụrụ otu on a Virtual Airline saịtị na-ese na n'oge 60 si AA agba ọ na-egosi elu na egwuregwu ma ọ dịghị VC. Adịghị m akwa file Ihọd ka na-amụ ma na ahụwo m posts banyere agbakwunye VC ka ụgbọ elu na ha otú ahụ ka m nọ nnọọ na-eche na ọ bụrụ na onye ọ bụla ebe a maara otú ime nke a ma ọ bụ nwere ike igosi m ebe m nwere ike ịmụta a na usoro. Daalụ n'ọdịnihu
2 afọ 4 ọnwa gara aga #156 by douglasjaen
2 afọ 4 ọnwa gara aga #158 by Gh0stRider203
ok ebe ị chọta a mma ??? M ga tinye ya na My collection!
Ma ihe ndị VC nsogbu, m n'eziokwu amaghị nwoke. M na mgbe ihe n'eziokwu kemgbe a ofufe nke VC ma ọ bụ na CS C-130 ma ọ bụ 707
2 afọ 4 ọnwa gara aga #159 by Gh0stRider203
Lemme post na a FB Group m na .... eleghị anya, onye ahụ ka a ga mara!
2 afọ 4 ọnwa gara aga #163 by FCAIR
virtualaal.weebly.com/fleet.html Nke a bụ ebe m nwetara na download si.
2 afọ 4 ọnwa gara aga #164 by Gh0stRider203
Ya mara ... m ga-eji a ole na ole ezi ụgbọelu ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị
2 afọ 4 ọnwa gara aga #166 by FCAIR
M mara mma ọhụrụ ka FSX m ga-atụle onwe m a ọma pilot n'ebe a. Ma m nwere mmasị na-eme ihe dị ka m na-enwe ọganihu na SIM. Na American bụ m Favorite Airline ndị mbụ ụgbọ elu na agba. Amabeghị ..
2 afọ 4 ọnwa gara aga #167 by Gh0stRider203
dị ka ogologo dị ka i nwere ike inwe si ebe a na-ezo b, na ike isusu runway on ọdịda, ị ọma na akpa ọchị. ugbu a kasị ochie ụgbọelu anyị nwere bụ a Boeing mkpagide 314 abụọ kasị okenye ga-abụ 707
Oge ike page: 2.338 sekọnd